घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सर्वनाम उपनामद्वारा जान्छ; "मोटो जीपी"। हाम्रो जर्डि अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाहरु को एक पूर्ण खाता को आफ्नो बचपन सम्म। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारेमा धेरै थोरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो गति र अस्थिरता संग बायाँ आक्रमण गर्दैछ। यद्यपि, केवल एक हात केही प्रशंसकहरू जोर्डि अल्बाको बायोको बारेमा जान्दछन् जो धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
जर्डी अल्बा रामोस मार्च 21 को 1989st मा स्पेन 'एल हस्टल' मा जन्मेका थिए। उहाँ कातालान जातीय समूहमा उनको आमा, मारिया जोस र पिता, अल्ब मेगुएलमा जन्मिएका थिए।
बार्सिलोनाको दोस्रो ठूलो नगर पालिकामा जन्मिएको र जन्मेको कारण फुटबलमा एक शौकको रूपमा ठूलो मौका हो जुन शहरको कुनै अन्य चीज भन्दा बढी फुटबलको लागि जानिन्छ। लिर्हार्डोको बार्सिलोनाका एल' अस्पतालले आफ्नो भाइ डेभीड अल्बसँग फुटबल खेलिरहेको हुन्थ्यो।
बढ्दै गयो, उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा स्पेनको बार्सिलोनामा स्पेनीमा राखेका थिए जसले उनलाई मौका दिए खेलकुदको दौडान खेलकुदको खेलमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्ने। वर्ष7मा 1996 को उमेर मा, Jordi Alba को परिवार ले आफ्नो छोरा को फुटबल को रूप मा कैरियर को रूप मा बनाउन को फैसला गरे। त्यही वर्ष, सानो जर्दी अल्बाले उनको क्यालोलोनियाको मूल क्लब क्लबसेन्ससँग फुटबल यात्रा सुरु गर्यो। उनी सबै भन्दा सानो, उनको टीम को बहादुर र कप्तान को रूप मा तल उल्लेख को रूप मा समझाएको थियो।
उनीहरूको उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि लोकप्रिय परम्पराको रूपमा ले मसिया (एफसी बार्सिलोना युवा फुटबल क्लब) जान्छ, अस्पतालसेन्सले आफ्नो स्टार प्लेयरको ट्राफिकका लागि संकोच गर्न सकेन। जर्डी अल्बा पूर्ण आशा संग लेमासिया फुटबल अकादमी गए। एकदम सानो थियो जसको बावजूद, जर्डीले गतिलाई पछाडि प्रदर्शन गरे जुन त्यस युवा युवा महासचिवले तिनको आशालाई स्वीकार गरे कि त्यो आगामी साढे बर्ष लामो हुने छ।
अल्बा वास्तवमा उनको बार्सिलोनाको बार्सिलोनाको बार्सिलोनामा एक बायाँ विङरको रूपमा। उनले क्लबमा प्रारम्भिक समय पाएका थिए। उनको एक यादगार क्षण मा उनको एफसी बार्सिलोना को पूर्व कोच संग खाने को खाने मा शामिल छ, लुईस भ्यान गल। तल फोटोमा प्रदर्शनको रूपमा, दुवै टेबलमा बसेर फुटबलमा जोर्डीको सबैभन्दा राम्रो स्थानको बारेमा चर्चा गर्दै।
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -कठिनाई सामना र प्रसिद्धिको बढ्दो
एक उच्च दर विकास र सँगसँगै बिगार्ने लुईस भ्यान गल बार्सिलोनाका ले मसिया अकादमीमा पक्षपातको गारंटी छैन। जोर्डे अल्बा एक प्रमुख समस्या थियो। त्यो तथ्य त्यो थियो "धेरै सानो"। जबकि उनको टोली आफ्नो उमेर संग लामो भयो, गरीब Jordi अस्थिर वृद्धि देखि पीडा भयो। यसले तपाइँलाई पनि बार्का इन्फैंटिल बी व्यवस्थापनमा भारी बहस गरायो लिओनेल मेस्सी क्षमा गरियो। 2005 मा, बार्सिलोनाले जर्डि अल्बालाई समझाएको थियो "धेरै सानो र पतली"। उनीहरूले फाईल विश्व कप5वर्ष पछि पछि देखा पर्नेछन्। यो नोट गर्न उल्लेखनीय छ जेमी वर्डी युवा फुटबलरको रूपमा समान भाग्यको सामना गर्यो।
आफ्नो आमाबाबु र बुबा भाइले प्रेरणाको लागि धन्यबाद, सानो जर्दीलाई सारियो। उनी आफ्नो छिमेकी क्लब Cornellà द्वारा स्वीकार गरिएको थियो। जर्डी अल्बले उनको पीडाबाट प्रेरणा पायो र उनीहरूको सहकर्मीसँग सान्त्वना पाए। वृद्धि पूरकहरूको सेन्टेन्टले पिच छिटो प्रदर्शनको बाधा संग मर्ज गरिएको थियो। विकास अन्त भयो जुन एक पटक जर्डेले उपनाम प्राप्त गरेको थियो "मोटो जीपी"
दुई वर्ष पछि उनले देखाए कि लम्बे बढ्दै गयो, एफसी वेल्सेन्सियाले बायाँ फिर्तामा € 6,000 को शुल्कको लागि नगद निर्णय गरे। यो वलिसिया जर्डी अल्बामा अन्ततः उनको युवा युवा क्यारियर समाप्त भएपछि युवा युनियनले तिकरा प्रभागलाई बढावा दिन मद्दत पुर्याए।
Alba 2008 / 2009 सिजनमा आफ्नो व्यावसायिक शुरुआत गरे। 2010 फीफा विश्व कप मा उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन अन्ततः एफसी बार्सिलोना लाई आकर्षित गर्यो जसले पहिले दया र क्षमा को लागि अनुरोध गरे। जर्डी अल्बले आफ्नो पुरानो क्लबलाई क्षमा गर्थे र तिनीहरूलाई 2012 मा सामेल गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फुटबल एक सुनको रूख हो, एक स्थान जहाँ जर्बी अल्ब उनको युवा मा छाया र पाईन्छ यसैले उनलाई एक महान व्यक्ति बनाउँछ। अहिले, बीयो महान स्पायर्डर्ड एक अनुहार आयो जसले आँखाले उनको हृदयमा लुकायो।
सुरू गर्न, ज्येष्ठ अल्बामा 2009 (वर्ष उसले स्पेनी यूएक्सएनएमएक्स टोलीमा पाएको छ) आफ्नो पूर्व प्रेमिका Mellisa Morilas संग एक सम्बन्ध शुरू गर्यो। फुटबलरसँग अन्तिम3वर्ष बिताए जो मेलिसा एक छात्र हो र तिनीहरूले एक लोकप्रिय वेल्सेशिया नाइट क्लबमा भेटे।
सजिलो स्पेनिश केटी जर्दी को नजिक को निगरानी मा राखयो र दूर अन्य अनुहार को आँखों देखि दूर। यो अर्थको अर्थ हो कि उनी ईर्ष्या प्रेमी थिए। जोर्डी ले पनि उनको स्वाद समस्या छ र उनको उपचार को रूप मा यदि उनि एक बच्चा थियो त तल चित्र देखि देख्यो को रूप मा भन्यो।
एक पल्ट Mellisa ले भन्यो कि उनले जोर्डी को रूप मा सक्षम को रूप मा देख्यो "ती केटीहरूसँग विनम्र र धेरै मायालु"। उनले एक पटक स्पेनिश प्रेसलाई बताए कि उनको प्रेमी हो "सधैं निगरानी र राम्रो मा बिस्तर मा"। मेलिसियाको निरन्तर निगरानीको क्रममा समय सकियो जोर्डी अल्बाको साथ राम्रो थिएन। यसले उनीहरूको सम्बन्धको अन्त्यमा चार वर्षसम्म चलेको थियो।
2014 मा, फीफा विश्व कप को वर्ष, जोर्डीले रोमानियर वेंटिरालाई भेट्न थाले। तिनीहरू 2014 भन्दा पहिले एक साथ देखिएका थिए तर यसले पहिलेको कुराकानीमा इन्कार गर्यो।
Romarey Sevilla देखि छ। उनी एक पटक विश्वविद्यालयमा पर्यटनको विद्यार्थी थिए र उनले मोडेललिंगमा संलग्न छन्। जोडाले धेरै फोटोहरू सँगसँगै साझेदारी गरेका छन् (समुद्र तट तस्बिरहरू) केहि समय पछि उनीहरु एकअर्काको डेटिङ गर्न अफवाहमा थिए।
यसको अतिरिक्त, रोमीरी वेंचरमा अल्बाको बहन (दाऊदको पत्नी) सँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ।
केही समय पछि, जर्डी र रोमीनी दुवै दु: खहरूलाई उनीहरूको आनन्दलाई प्रशंसकहरूमा देखाउन चाहन्थे। अगस्ट 2017 मा, रोमीरी वेंटिरा उनको पहिलो बच्चा संग गर्भवती थियो। उनले इन्स्टाग्राममा फोटोलाई अल्बियासँग पोष्ट गरे जसमा उसले उनको पेट छुटेको छ। "धेरै प्यार को पूरा" उनले लेखे।
Alba को आमाबाबुलाई खुसी हुनै पर्छ किनकि तिनका भाइ डेभीडले पनि एकैचोटि आफ्ना साथी साझेदार केरोललाई एकैचोटि आशा गर्दैछन्। ""
जर्डी र रोमीनीले 18th को जनवरी 2018 मा आफ्नो पहिलो छोरा पेरोयो थियो।
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन तथ्य
मुन्डो डिपोर्टोको साथ जर्डी अल्बाको साक्षात्कारमा पूर्ण-पछाडि पनि उनको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्दछ। उदाहरणका लागि ...अल्बान्ले स्वीकार गरे कि उसले एक दिन 12 घण्टा सुत्छ!. तल निम्न क्यू र ए हुन्।
प्रश्न: तपाईको सामान्य जीवनलाई ल'अस्पतालमा राख्छ?
जोर्डी अल्बाले जवाफ दिन्छन्: "त्यहाँ बस्दै, म सिनेमा, किनमेल केन्द्रहरू या बारहरू गए। म पनि थियेटर "जोभन्टुट" मा जान्छ, जहाँ मेरो प्यार मा आमाले काम गर्दछ "।
क्यू: तपाईं एक शतरंज प्रशंसक हुनुहुन्छ?
जोर्डी अल्बाले जवाफ दिन्छन्: "म यसलाई खेल्दै माया गर्छु र म यो मेरो बुबा संग गर्दैछु। यसले मलाई विचार गर्दछ र यही कारणले मलाई लाग्छ कि यो शतरंजले स्कूलमा सिकाइरहेको छ भन्ने कुरा हो "।
प्रश्न: के तपाई साँच्चै 12 घण्टा सोनु हुन्छ?
जोर्डी अल्बाले जवाफ दिन्छन्: "म 12 वा 13 घण्टाको लागि सुत्न सक्दिन। रातमा म 12AM बाट9सम्म गर्छु र मेरो 2,3 वा4घडीको मिडाइमा मिडाइमा "
प्रश्न: के तपाईं पागल सलाद गर्नुहुन्छ?
Jordi Alba प्रतिक्रिया"सलादले मलाई पागल बनाउँछ। म यसलाई दोपहर को भोजन र रात को खाने को लागि ... म नाश्ता मा नहीं सकता तर म सलाद, केहि चिकन र केहि चावल संग खुश हूँ। म एक दिन3लीटरको पानी पिउन चाहन्छु "।
Q: के तपाईं संगीतको फ्यान हो, शायद केविन रोल्डन?
जोर्डी अल्बाले जवाफ दिन्छन्: "म रमू र" flamenco "मनपर्छ। केविन रोल्डन? मलाई थाहा छैन कि "
क्यू: तपाइँ टेलिभिजन मन पराउनुहुन्छ?
जोर्डी अल्बाले जवाफ दिन्छन्: "मलाई स्पेनी टिभी शो मन पर्छ" ला क्यू सेव "। म एउटै एपिसोडले पाँच पटक हेर्न सक्छु र म हँसिरहेको छु "।
अन्ततः, जर्डी अल्बा पर्सनल लाइफमा, उनी ब्रायन को ब्रान्ड राजदूत हुन् र उत्पादनहरूलाई बढावा दिन्छन्। उनले अडी सहित थुप्रै लक्जरी कारहरूको मालिक राख्छन्।
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत पुरस्कार
अल्बाले थुप्रै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय शीर्षकहरू जितेका छन्। 2017 / 2018 सिजन भन्दा पहिले, उनले एफसी बार्सिलोनालाई लिग्रा र कोपा डेल रे लाई चार पटक प्राप्त गरेको छ। उनले दुईपटक सुपरक्रोपा डे एस्पेनालाई प्राप्त गरे र 2015 मा फीफा क्लब विश्व कप प्राप्त गर्यो। अधिक तो बार्सिलोना संग, उनले यूएई चैंपियन्स लीग र 2015 मा UEFA सुपर कप हासिल गरे। उनको क्लबको सफलताको अलावा, उनले अहिले सम्म धेरै व्यक्तिगत पुरस्कार पाए। उनीहरूको बीचमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार निम्नानुसार छन्:
टूर्नामेंट को यूईएफई यूरो टीम: 2012
FIFPro विश्व XI: दोस्रो टोली , तेस्रो टोली [2013, 2014 र 2016]
UEFA चैंपियंस लीग: सीजनको टीम [2014-15]
ला लीगा: सीजनको टीम [2014-15]
जर्डी अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बजाउने शैली
अल्बा टेक्नोलोजी धेरै चालित र छिटो आक्रमण गर्ने बायाँ-पछाडि पनि बायाँ विन्जरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनको गति र सहनशीलताले उनीहरूलाई अपराध र रक्षा दुवैमा संलग्न हुन अनुमति दिन्छ किनकि उसले धेरै चाँडै पिचको एक अन्तबाट प्राप्त गर्न सक्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जर्डि अल्बा बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
थियगो अल्टांतारा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
इस्को बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अन्डर हेरारा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Nacho Fernandez बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य